Ọ bụ echiche siri ike! Ma tụgharịa n'akụkụ - ọ bụrụ na ọ bụla ọkachamara kọntaktị m agbakwunyere m na akwụkwọ akụkọ ha na-enweghị m na-ajụ / inye ikike - M ga-abụ oke iwe.
Gbakwunye na - isiokwu gị - ọdịnaya gị bụ ihe ọtụtụ mmadụ ga - enwe obi ụtọ. Echeghị m na ndụmọdụ a ga-emetụta ụlọ ọrụ niile.
Hit kụrụ ntu ahụ n’isi, Bobbie! Ọ bụghị naanị na ọ ga-adị mkpa, ọ ga-abara ndị na-ege ntị uru.
Doug, mgbe ụfọdụ naanị m na-agụ akwụkwọ na onye na-agụ RSS m, mana nke a dị oke egwu iji kwado nkwụsị na ịza ajụjụ. Ekwenyere m na 100% ma na-arịa ọrịa email nazi na-anwa ime ka ngwa ahịa ha sie ike mgbe ndị ọzọ na-ajụ ase na-arụkọ ọrụ ọnụ.